Mr P. wuxuu bilaabay aruurinta 60-ka sano Ragga Stylish
60-meeyadii waxay dhiirrigelinayaan ururinta labaad ee Mr P.
Qaabkii Mareykanka ee 60-kii waxay dhiirrigelisay ururinta labaad ee Mr P., oo ah astaan ​​uu abuuray oo naqshadeeyay dukaanka internetka, Mr Porter.
Shaatiyada qoorta furan, chinos-lugta ballaaran, jaakadaha milatariga ... Mr P. wuxuu sheegay in hadafkiisu ahaa inuu cusbooneysiiyo dharka xilligan (ogaanshaha gaar ahaan kahor-'Easy Rider 'Dennis Hopper), laakiin ilaalinta qaababkeeda caadiga ah.
Shirkaddu waxay ku noqotaa sharad kuwaa gogo 'aan waqti lahayn oo nin waliba ugu baahan yahay labiskiisa si loo abuuro muuqaal maalinle ah oo leh dammaanad. Sida shaatiyada badhanka hoose ee buluuga ah, buluug buluug buluug ah, iyo funaanado gacmo gaab ah oo midabkoodu gaaban yahay.
Raadinta inuu ka sarreeyo isbeddellada, Mr P. wuxuu ku sharaddeeyaa a midabada aasaasiga ah ee midabada midabka leh (cawl, buluug buluug ah, beige ...) iyo xargaha caadiga ah oo ah qaabka kaliya ee ururinta.
Marka laga hadlayo jaakadaha, aruurinta labaad ee Mr P. waxaa ka mid ah jaakadaha milatariga, jaakadaha suudka ah, jaakadaha jiifka iyo jaakadaha dhogorta caadiga ah. Labis rasmi ah iyo mid aan rasmi ahaynba, laakiin, dabiici ahaan, dhammaantood leh xirfad shaqo oo cad.
Kordhinta funaanadaha iyo shaatiyadaha hoose, xagga hoose waa surwaal dharka cawlan (labada dhexda caadiga ah iyo kuwa laastikada ah), chinos bunni ah iyo jiinis yar oo yaraaday. Xataa haddii shirkadu waxay muujineysaa doorbid goynta caatada ah, ha ilaawin surwaalka lugta dheer sidoo kale.
Iibka hadda, Mr P. ururinta labaad waa a habka ugu wanaagsan ee loo xoojiyo tiirarka dharkaaga dharka leh, taas oo ay ugu mahadcelinayaan isku dheelitirnaanta kaamil ah ee u dhexeeya tayada, qaab-dhismeedka iyo casriga, leh rabitaan xoog leh oo waaraya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » 60-meeyadii waxay dhiirrigelinayaan ururinta labaad ee Mr P.
Dacwadaha: 5 fikradood oo lagu daro midabada guga